कांग्रेस शीर्ष नेतासँगकाे भेटमा के भनिन् राष्ट्रपतिले ? – Online National Network
कांग्रेस शीर्ष नेतासँगकाे भेटमा के भनिन् राष्ट्रपतिले ?
८ पुष २०७४, शनिबार ०४:१३
काठमाडौं, ८ पुस – प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका छन् । राष्ट्रिय सभा पहिले गठन नगर्ने हो भने सबै दलबाट ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व संघीय संसद्मा नहुने कांग्रेसको दाबी छ ।
‘सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राष्ट्रिय सभा गठनको बाटो खुल्ने र संघीय संसद्का दुवै सदनमा सबै दलबाट एकतिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कुरा राष्ट्रपतिलाई खुलस्त बताएका छौँ,’ राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सहभागी कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘पहिले राष्ट्रिय सभा गठन नगरी प्रतिनिधिसभा गठन हुँदा सबै दलबाट ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुने कुरा राष्ट्रपतिलाई प्रस्ट पारेका छौँ । यसका लागि अध्यादेश प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रिय सभा गठन र सरकार गठनको बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका छौँ।’
संविधानले संघीय संसद्का राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलबाट ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ ।
‘राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुन बाँकी छ । हारजित हुन बाँकी छ । निर्वाचनमा तालमेल पनि हुन सक्छ । यस्तोमा हारजित र तालमेलले गर्दा तोकिएजति नै महिलाको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट नहुन सक्छ,’ कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले भने, ‘यसरी हारजित र तालमेलबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदा प्रत्येक प्रदेशबाट तोकिएजतिमहिलाको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी नहुने भएको हुनाले कानुनले तोकेअनुसारको ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता गराउन प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सूचीबाट मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।’
के भनिन् राष्ट्रपतिले ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशमा दलीय धारणा बाझिएकाले सहमति जुटाएर आउन कांग्रेस नेताहरूलाई सुझाब दिएकी छिन् । ‘अहिलेसम्म तपाईंहरूले सहमतिबाटै जटिलता फुकाउँदै आउनुभएको छ । अध्यादेशमा देखिएको फरक–फरक धारणामा पनि सहमति गरेरै आउनुस् । तपाईंहरूले जे सहमति गर्नुहुन्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्छु,’ राष्ट्रपतिको भनाइ थियो । उनले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशमा दलहरूबीच फरक–फरक धारणा आएको र व्याख्या भएकाले रोकिएको संकेत दिएकी थिइन् । आफूले एमाले र माओवादी नेतासँग छलफल गरेको बताउँदै उनले छिटै राजपा र संघीय समाजवादीसँग पनि छलफल गर्ने जानकारी दिएकी थिइन् ।
कांग्रेस नेताको कुरा सुनेपछि राष्ट्रपतिले ‘तपाईंहरूले धेरै कुरा बुझाउनुभयो’ भन्दै एक–दुई दिन छलफल र परामर्शपछि अध्यादेशको विषय टुंगिने संकेत दिएको छलफलमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘यसकारण अब अलमल नगरी अघि बढौँ भनेका छौँ । यसमा राष्ट्रपति सकारात्मक भएको पाएका छौँ । अब केही दिनमा उहाँले अध्यादेश जारी गर्नुहुन्छ । र, राष्ट्रिय सभा गठन र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ ।’ – नयाँपत्रिका दैनिक